Dimy Taona Tao Amin’ny Global Voices sy RuNet Echo · Global Voices teny Malagasy
Dimy Taona Tao Amin'ny Global Voices sy RuNet Echo
Voadika ny 11 Avrily 2017 4:32 GMT
Vakio amin'ny teny Ελληνικά, русский, Français, Español, English
Ity volana ity no manamarika ny faha-dimy taona naha-tato amin'ny Global Voices ahy, toerana namoahako ny RuNet Echo niaraka taminà olona telo manan-talenta: Andrey Tselikov, Tanya Lokot, sy Isaac Webb. Niaraka niasa taminà olona am-polony tena mpanoratra niasa an-tsitrapo tokoa — izay sady matianina amin'ny fanaovana gazety no manampahaizana, ary ireo hafa izay mirotsaka eny an-kianja. Ary dia voninahitra ho ahy ny nanaraka ny fahaizana mitarika olona, toa an'i Ivan Sigal, Tale Mpanatanteraka, Sahar Habib Ghazi, tonian-dahatsoratra ary ny Talen'ny Advocacy Ellery Biddle.
Tsy afaka hisolo vaika ireo mpamakin'ny RuNet Echo aho, saingy dia fotoana mamy tokoa no anoratako ho anareo.
445 lahatsoratra no voalalazan'ny tranonkalanay fa nosoratako hatramin'ny nanombohako ary ity vetsovetso ity no faha-446. Ny lohataona 2012 aho no nanjohy ny Global Voices, tamin'ny fotoana nisian'ilay nantsoina hoe “Ririnin-Katezerana” tao Rosia indrindra. Andro vitsy monja talohan'ny hahazoan'i Vladimir Putin fandresena tamin'ny fifidianana ho filoham-pirenena, sy mbola naha-filoha (raha lazaina amin'ny fomba teknika) an'i Dmitry Medvedev .
Nandritry ny dimy taona lasa, nahafeno ny tsingeriny ny zavatra sasany tao Rosia, raha ny hafa kosa toa lasa montsana tsy nimpody. Indray andro i Dmitry Medvedev dia toy ny namelona ny fanantenan'ireo Rosiana marobe izay ny governemantany no toa hanome fahalalahana politika sy hampitsahatra ny fanaratsiana ny demaokrasia ao amin'ny firenena.
Ankehitriny, i Medvedev no endriky ny kolikoly, saika noho ny asa samirerin'ilay mpitarika ny mpanohitra, Alexey Navalny, ilay mpanjakan'ny bilaogera izay nanintsana ny nifiny nampiseho ny fahalovana sy ny raharaha maloton'ireo vondron'orinasa an'ny fanjakana ao Rosia.
Dimy taona lasa izay, mbola azo natao tsara ny nametraka ho anaty sarintany ireo pejin'ny LiveJournal ary nikirakira azy toy ny fitetezana ny tontolon'ny bilaogy Rosiana. Ankehitriny, toy ny any amin'ny toerana maro manerana izao tontolo izao, maty ny fanoratana bilaogy ao Rosia araka ilay fomba nahalalàna azy hatry ny taloha. Mbola misy an-tapitrisa ny Rosiana no mampiasa ny LiveJournal, saingy ireo fiarahamonim-pirenena — fotokevitra tsy isalasalàna fa sarotra raisina sy mety ho kidaladàla — dia nikisaka niparitaka any anaty sehatra am-polony malaza any.
Ao amin'ny Facebook no ampiantranoin'ireo mpanao gazety sy mpikatroka mafàna fo avy ao Maosko ireo heviteny politika, sy famoahana ireo famelezana ny zavatra tsy mety hitany amin'ny fiainana manokana, ataon-dry zareo anaty fanehoankevitra mivilana. Tao amin'ny Twitter, mifampikapa ranjo ireo kaonty maro tsy mitonona anarana fa mametraka sainampirenena ho solon'ny sariny ary samy maneho hevitra momba izay vaovao mafàna avokoa ny olona rehetra. Afaka arahanao ao amin'ny Instagram ny fetim-piravoravoana nataon'ireo tsy mpankasitraka an'i Kremlin, izay ahitàna ihany koa lahatsary mampiseho ny fomba fiaina be rehaka sitrahan'ireo zanakalahy sy zanakavavin'ireo Rosiana manampahefana ambony. Misy an'izany antsoina hoe Telegram izany izao — noforonin'ilay mpamorona ny Vkontakte voahongana fahiny, izay ampiasain'ny ankamaroan'ireo Rosiana tsotra, ho solon'ny Facebook — ary ao amin'ny Telegram ianao dia afaka mamandrika “fantsona” hizaràna ny toa “fandalinana politika miainga avy eny ifotony”
Izany rehetra izany dia entina hilazàna fa ny zavatra rehetra ao amin'ny YouTube, sehatra fifampiresahana aty anaty Aterineto toy ny Dvach, vondrom-piarahamonina misy mpitantana toy ny TJournal, ireo tetikasa fanaovana vaovao mahatsikaiky toy ny Lentach, ary ny azoko antoka dia sambo avy amin'ireo lafivalo hafan'ny tranonkala izay tsy mbola reko hatrizay mihitsy.
Fony tao amin'ny RuNet Echo, nahita maso onjan-tsingerim-baovao Rosiana maro aho. Tamin'ny 2012 rehefa nanomboka aho, tsy mbola nanao afa-tsy ny namoaka ny lisitra maintin'ny Aterineto ireo mpanao lalàna tao Maosko, izay toy ny endrika fototry ny sivana Rosiana ankehitriny. Ilay ‘rejisitra’, araka izay ahafantrana azy amin'ny fomba ofisialy, dia nanomboka tamim-pahatsorana sahala amin'ny hoe ampinga iray hiarovana ny ankizy tanora tsy ho voan'ireo zavatra faran'izay ratsy ety anaty aterineto. Ilay lalàna voalohany aza dia nahazo ny fanohanan'i Ilya Ponomarev, ilay hany solombavambahoaka tokana tao amin'ny parlemanta Rosiana nifidy nanohitra ny fakàn'i Maosko an'i Krimea taty aoriana.
Dimy taona aty aoriana, mbola matroka hatrany ny toerana misy ny fahalalahan'ny aterineto ao Rosia, saingy ratsy lavitra noho ny taloha, ary — ny tena zavatra manandanja ho ahy, amin'ny maha-olona manoratra momba azy io ahy — zavatra tsy ataon'ny olona hahagaga loatra intsony, izay fomba iray hafa entina hilazàna fa tsy dia miraharaha be loatra intsony ireo olona ivelan'i Rosia (ireo tena mpanaraka ny RuNet Echo).
Mazava loatra, ry zareo Amerikàna, amin'ny lafiny rehetra, no miraharaha kokoa ny momba an'i Rosia toy izay efa nataony hatramin'ny 1990 tany ho any, fony nidaraboka ilay efa fantatrareo hoe inona. Saingy efa talohan'izany no nahitanay tantara ny fanivànana aterineto. Ary efa hitanay ny tatitra momba ny hetsi-panoherana tao Maosko izay nisamboran'ny polisy mpandrava korontana ilay nanao hetsipanoherana am-pilaminana.
Polisy efatra feno fahasahiana no nitondra tovovavy iray, nandaka sy nikitakita ? Misy sary ve ?
Loza, eny, saingy koa efa tena mahazatra tanteraka — fehezanteny iray azonao atsofoka ho toy ny maribolana amin'ny zavatra rehetra azo ambara amin'izao fotoana izao momba ny fitondran'i Putin. Tsy vaovao intsony mihitsy ny tsingerim-baovao Rosiana.
Fa indray andro any, mbola hiverina indray io. Na io ho fitroaran'ny tanora aterak'ireo lahatsary niparitaka be avy amin'i Navalny, na somary ho fanavaozana milamindamina ny fitantanam-panjakana ao Rosia, manana andro natao hifarànany ny vanimpotoana Putin, ary izay no ho vaovao.
Raha namaky hatreto ianao, mety nieritreritra hoe toa mieboebo aho. Fa na izany na tsy izany, inona moa no iraharahan'ny Amerikàna ka itsofohany amin'ny RuNet isisihany momba izay hoavin'ny politika faratampon'ny Rosiana? Raha ny andavanandro, raha izay miseho ao amin'ny tontolon'ny habaka Rosiana no resahana, tsy olana raha i Vladimir Putin. Betsaka amin'ireo tantara tsara azo lazaina momba an'i Rosia no tsy misy ifandraisany na iray aza amin'i Putin.
Saingy mbola mamela dindo goavana eo amin'ny fiarahamonina ny anjara toerana raisin'i Kremlin ao amin'ny kolontsainan'ny aterineto ao Rosia — indrindra fa eny anivon'ireo mpikatroka mafàna fo mikatsaka ny hiteny sy ireo mpanao gazety izay mahafantatra zavatra betsaka noho izay azony ambara ao am-piasàny.
Rehefa nipetraka hanoratra ity aho, nanantena fa niasa tamin'ny fombako hanao famintinana goavana teo noho eo. Zavatra mahakasika ny fahafahana manoratra ny hoe “Ny RuNet misaina Y momba ny Z,” na dia misy aza ny fironana sy ny fihetsehampo, ary azo atao ny maka sary ao an-tsaina ny “kolontsain'ny aterineto Rosiana” ho toy ny fotokevitra mivaingana amin'ny ampahany ihany. Ary, eny, ao ireo politika rehetra. Ao i Putin sy ny Domà-mpanjakana ary ny mpitondra tenin'ny Ministeran'ny Raharaha Ivelany, Maria Zakharova, mameno ny Facebook aminà zavatra foronina.
Amin'ny farany, misy betsaka ireo azo isaina sy raisina, nanao izany aho nandritry ny dimy taona, ary manantena ho mbola eto mandritry ny taona maro. Misaotra anareo mamaky ny RuNet Echo. Ilazao ny namana. Ilazao ny rehetra.